calendar 2013 “Town” Kalandarka - Joornaalka Naqshadeynta
Kalandarka Magaaladu waa xirmooyin waraaqaha lagu sameeyo oo ay ka kooban yihiin qaybo si xor ah loogu dari karo kalandarka. Isku habee dhismayaasha qaabab kala duwan oo waxaad ku raaxeysataa sameynta magaaladaada aad u yar. Nolosha leh Naqshadeynta: Nashqadaha tayada leh waxay leeyihiin awood ay wax kaga beddelaan boos oo ay u beddelaan maskaxda isticmaaleyaasheeda. Waxay bixiyaan raaxo aragtida, haysashada iyo adeegsiga. Waxay lafiican yihiin iftiin iyo shey la yaab leh, oo kobcinaya boos. Waxyaabahayaga asalka ah waxaa loo qaabeeyey iyadoo la adeegsanayo fikradda ah "Nolosha leh Naqshadeynta".
Magaca mashruuca : calendar 2013 “Town”, Magaca naqshadeeyayaasha : Katsumi Tamura, Magaca macmiilka : good morning inc..
Kalandarka Katsumi Tamura calendar 2013 “Town”